yingqwayi: Crystals Amandla | Coinfalls Casino
yingqwayi: Crystals Amandla
The NetEnt slot yingqwayi: Crystals Amandla ngokuzigwagwisa zamashishini esinzulu ngokungafaniyo uninzi zokubeka ikhathuni-mhlaba. yingqwayi: Crystals Amandla lidibanisa 3 yingqwayi ekulweni phakathi kwabo ukuqokelela crystals lwamandla. Ngoko ke, esimka akukho sizibhokoxa kunye nokulawula onke amagunya abo ukoyisa ubutyebi kuwe kwaye bona. The 3 yingqwayi The mbharbhari, wayengumbingelelikazi, kunye Samurai. Bona abo banoxanduva hleleka phandle iimpawu ezifana aziyeki simahla aziyeki-kwakhona, adakasa eDibanisa etc. ukuqinisekisa ukuba umvuzo omkhulu abe nexesha ecocekileyo fun. Hlola yethu Coinfalls.com/power-spins-in-play-bonuses/ page for more deals online!
ukususela 1996, NetEnt iye kungena ishishini ubuchwepheshe kule midlalo. Le nkampani ofisi kumazwe ahlukeneyo kwihlabathi jikelele ezifana Sweden, Maltha, Yukreyini, Gilbhraltha, i-USA, kwaye Poland. Bona lidike kwama 700 kubasebenzi asele phezu 100 ye zikhasino online ehlabathini. Kukho malunga 200 imincili imidlalo ngetyala babo kude umhla kwaye uluhlu uye wakha ekwandiseni.
yingqwayi: Crystals Amandla ikubekela imvelaphi Emdaka 5 namacwecwe lwenzisisiswe wafukama phezu kwayo. Segments nangoko ups umoya wakho ekulweni kunye 30 paylines ngasekunene. Uluhlu ukubheja iqala ukusuka ubuncinane £ 0,15 ukuya kwelona £ 150. Lo Gameplay inikeza Rtp 96.89% kubadlali. Umdlalo slot idala idabi umfanekiso ogqibeleleyo yaye kudala umoya okuqaqambileyo ukuze umdlali. Uphawu zasendle ku inqala kwaye lisebenza nayiphi na enye isimboli ukwenza ngokuphumelela indibaniso kuwe. Nazi 2 iintlobo adakasa akhoyo kulo mdlalo, namely the standard wilds and the overlay wilds.
The 3 yingqwayi nawo iisimboli Wazibhangisa. Kwaye oku kuquka yiNdyebo mbharbhari, Wayengumbingelelikazi kunye Samurai aziyeki ivideo kufundiswa kumngxuma.
Idabi isigqibo apho zonke iimpawu uya ibihlaba ngexesha Gameplay. ngelo xesha, zikho nezinye iinkalo ezithile random somdlalo leyo ubophelelekile ukuba baxhamle. Zizo ezo osemqoka Final Chance, Battle osemqoka, kunye neempawu womgca, besiphelekelela bonke amabhaso ezininzi umdla kuwe.
Inani iimpawu elongeziweyo emdlalweni inene yenza oku slot ume ngaphandle umkhosi zokubeka ezikhoyo emarikeni. Ukuba sinandipha Gameplay imincili ngesantya esinobungozi bazijizeke ibe bubuncwane yeempawu ezinjalo, ngelo xesha yingqwayi: Crystals Amandla ke kumngxunyana kunene kuwe.